Inqubomgomo Yamakhukhi - BancaNEO
Usuku lokuqala ukusebenza: 1st June 2021
Le Nqubomgomo Yamakhukhi ichaza ukuthi kanjani Bancaneo.org (“we”, “us” noma “our”) isebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo maqondana ne-www.Bancaneo.org iwebhusayithi.
Amakhukhi amafayili wombhalo amancane abekwe kwikhompyutha yakho ngamawebhusayithi futhi kwesinye isikhathi ngama-imeyili. Banikeza imininingwane ewusizo ezinhlanganweni, ezisiza ukwenza ukuvakasha kwakho kumawebhusayithi abo kuphumelele futhi kusebenze kahle. Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukuqonda ukuthi uwasebenzisa kanjani amawebhusayithi ethu futhi siqinisekise ukuthi singenza intuthuko kumawebhusayithi.
Amakhukhi aqukethe ulwazi lomuntu siqu noma oluyimfihlo olumayelana nawe.
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola okuhle kuwebhusayithi yethu. Isikhathi sokuqala lapho uvakashela iwebhusayithi yethu uzocelwa ukuthi uvume ukusebenzisa kwethu amakhukhi futhi siphakamisa ukuthi uvume ukuvumela amakhukhi ukuthi asebenze kudivayisi yakho ngenkathi uvakashela futhi upheqa iwebhusayithi yethu ukuqinisekisa ukuthi uthola iwebhusayithi yethu ngokugcwele .
Izinhlobo zamakhukhi esingazisebenzisa zifaka:
Amakhukhi eseshini ahlala kuphela ngesikhathi sokuvakasha kwakho futhi ayasuswa lapho uvala isiphequluli sakho. Lokhu kwenza imisebenzi ehlukahlukene njengokuvumela iwebhusayithi ukuthi ibone ukuthi umsebenzisi wedivayisi ethile uzulazula kusuka ekhasini kuye ekhasini, esekela ukuphepha kwewebhusayithi noma ukusebenza okuyisisekelo.
Amakhukhi aqhubekayo ahlala ngemuva kokuvala isiphequluli sakho, futhi uvumele iwebhusayithi ukuthi ikhumbule izenzo zakho nezinto ozithandayo. Kwesinye isikhathi amakhukhi aphikelelayo asetshenziswa ngamawebhusayithi ukuhlinzeka ngokukhangisa okuqondisiwe okususelwa kumlando wokuphequlula wedivayisi.
Sisebenzisa amakhukhi aqhubekayo ukusivumela ukuba sihlaziye ukuvakashelwa kwabasebenzisi kusayithi lethu. Lawa makhukhi asisiza ukuthi siqonde ukuthi amakhasimende afika futhi asebenzise kanjani isiza sethu ukuze sikwazi ukuthuthukisa insizakalo ephelele.
Amakhukhi adingekayo kakhulu
Lawa makhukhi abalulekile ukuze ukwazi ukuhambisa iwebhusayithi futhi usebenzise izici zayo, nokuqinisekisa ukuphepha komuzwa wakho. Ngaphandle kwalezi zinkonzo zamakhukhi ozicelile, njengokufaka isicelo semikhiqizo nokuphatha ama-akhawunti akho, akunakunikezwa. Lawa makhukhi awahlanganisi imininingwane ngawe ngezinhloso zokumaketha.
Lawa makhukhi aqoqa imininingwane yokuthi izivakashi ziyisebenzisa kanjani iwebhusayithi, ngokwesibonelo ukuthi imaphi amakhasi izivakashi eziya kuwo kaningi, futhi uma zithola imiyalezo enamaphutha emakhasini ewebhu. Yonke imininingwane lawa makhukhi ayiqoqayo isetshenziselwa kuphela ukuthuthukisa ukuthi iwebhusayithi isebenza kanjani, ulwazi lomsebenzisi kanye nokwenza ngcono ukukhangisa kwethu. Ngokusebenzisa amawebhusayithi wethu uyavuma ukuthi singabeka lezi zinhlobo zamakhukhi kudivayisi yakho, noma kunjalo ungawavimba lawa makhukhi usebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho.
Lawa makhukhi avumela iwebhusayithi ukuthi ikhumbule izinqumo ozenzayo (njengegama lakho lomsebenzisi). Imininingwane lawa makhukhi ayiqoqayo ayaziwa (okusho ukuthi ayinalo igama lakho, ikheli njll.) Futhi ayilandeleli umsebenzi wakho wokuphequlula kwamanye amawebhusayithi. Ngokusebenzisa amawebhusayithi wethu uyavuma ukuthi singabeka lezi zinhlobo zamakhukhi kudivayisi yakho, noma kunjalo ungawavimba lawa makhukhi usebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho.
Lawa makhukhi aqoqa izingcezu eziningana zolwazi mayelana nemikhuba yakho yokuphequlula. [Zivame ukubekwa ngamanethiwekhi wesithathu wokukhangisa]. Bayakhumbula ukuthi uvakashele iwebhusayithi futhi lolu lwazi lwabiwa nezinye izinhlangano ezifana nabashicileli bezindaba. Lezi zinhlangano zenza lokhu ukuze zikunikeze izikhangisi ezihlosiwe
ihambisana kakhulu nawe nezintshisekelo zakho.
Sicela wazi ukuthi abantu besithathu (kufaka phakathi, ngokwesibonelo, amanethiwekhi wokukhangisa nabahlinzeki bezinsizakalo zangaphandle ezifana nezinsizakalo zokuhlaziya ithrafikhi yewebhu) bangahle basebenzise amakhukhi, esingenawo amandla okuwalawula. Lawa makhukhi kungenzeka abe amakhukhi wokuhlaziya / wokusebenza noma amakhukhi wokukhomba.
Ungalawula futhi / noma ususe amakhukhi njengoba ufisa - ngemininingwane, bheka mayelana ne-cookies.org. Ungasusa wonke amakhukhi asevele akhona kukhompyutha yakho futhi ungasetha iziphequluli eziningi ukuzivimbela zingabekwa. Uma wenza lokhu, noma kunjalo, kungadingeka ukuthi ulungise ngesandla okuthandayo njalo lapho uvakashela iwebhusayithi yethu noma usebenzisa i-Platform yethu futhi ezinye izinsizakalo nokusebenza esikunikezayo kungenzeka kungasebenzi.
Ukunciphisa noma ukuphatha amakhukhi, sicela ubheke isigaba 'Sosizo' sesiphequluli sakho se-inthanethi.
Ngeminye imininingwane, sicela uxhumane nathi [i-imeyili ivikelwe]